Scalping izimvilophu EA - Online Forex EA sika | Expert Advisors | FX Robots
IkhayaFree Forex EAsScalping izimvilophu EA
Scalping izimvilophu EA iyi-automated System Forex yokuhweba ethola ukungenelela okuphezulu okungenzeka kwamanani okwehla kwamanani we-Envelope indicator. Kusebenza kuphela ngama-oda alindile, okuvumela ukuthi uhlaziye futhi ulawule izenzo ze-EA.
The Expert Advisor isebenzisa Stop Loss ngakho-akhawunti njalo bavikelekile lapho beshonelwe umntwana okusezingeni. I inzuzo engahle ukuhweba ngamunye ziphakeme kakhulu uma kuqhathaniswa umonakalo kungenzeka, njengoba smart Trailing stop isetshenziswa ukuyekela inzuzo run.
Scalping izimvilophu EA ilungiselelwe EURUSD I-M30, i-0.00001. Kumelwe unamathisele i-EA eshadini futhi uvumele ukuhweba okuzenzakalelayo ukuvumela uMeluleki wezobuchwepheshe asebenze. Umeluleki wezobuchwepheshe uzosebenza ngamabhulodi amaningi aphansi okusakaza. Ngezilungiselelo ezifanele kufanelekile nanoma yisiphi isikhathi ozimele.
Scalping izimvilophu EA - Izilungiselelo
Magic THENGA - Inombolo magic ezikhundleni eside the EA sika;
BATHENGISE Magic - Inombolo magic for ezikhundleni EA imfushane;
Sabalalisa Max - Esiphezulu ukusabalala, lo EA ngeke ukudayisa uma ukusakazeka lwamanje ngaphezu U-Spred_Max;
Lots Ipharamitha - Fixed kwemigomo lot;
___Loss Ukuvikelwa settings___
BE amaphuzu 0 Akusebenzi - Guqula stop ukulahlekelwa Breakeven lapho inzuzo yokuma wamanje sifinyelela inombolo ethile amaphuzu, uma 0 = abakhubazekile;
TP amaphuzu 0 Env - Take inzuzo amaphuzu, uma 0, khona-ke thatha inzuzo isethwe ngokusho kwemigomo ezimvilophini inkomba;
SL amaphuzu 0 Env - Stop ukulahlekelwa amaphuzu, uma 0, kodwa ke bame endleleni ukulahlekelwa isethwe ngokusho kwemigomo ezimvilophini inkomba;
___ Izilungiselelo Indiсator ___
Isikhathi Env - Inkathi izimvilophu inkomba;
I-Deviati Env - Ukuphambuka of the izimvilophu inkomba;
___Time Izilungiselelo trade___
Okunqunyelwe Amaminithi - Imizuzu ngaphambi kokuphela oda elindile;
Ukuhweba HoursStart - Yokuhweba uqale ngehora;
Ukuhweba HoursEnd - Yokuhweba ekupheleni ihora;
Iyabonakala kuwo SL TP - Uma Yiqiniso, oyenza ukuhweba ebonakalayo nge stop ukulahlekelwa kanye uthathe inzuzo; Nangabe umamala, ayeke ukulahlekelwa futhi uthathe inzuzo azibonakali futhi yasebenza umkhaza wokuqala we bar entsha.
Thwebula Khulula Scalping izimvilophu EA